तपाईको यो साता कति शुभः ? मंसिर १२ गतेदेखी मंसिर १८ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल - TinjureOnline
November 27, 2021 November 27, 2021 TinjureOnline235LeaveaComment on तपाईको यो साता कति शुभः ? मंसिर १२ गतेदेखी मंसिर १८ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) साताको सुरुवाति दिन उत्तम रहनेछन । पुराना लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ । अहंताको बृद्धिहुनाले आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा भने सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । मनोरञ्जनपुर्ण यात्राको योग रह।ेकोछ । पुराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । मगंलबार पश्चात भने भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा खराबि उत्पन्न हुन सक्नेछ । जटिल कार्यहरुको बिशेष जिम्मेवारी प्राप्त रहनाले कार्य प्रति लगनसिल रहनु पर्नेछ । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि रहनु पर्नेछ । साताको अन्त्यमा बौधिक ब्यत्तित्वहरुको साथ तथा सहयोगमा आम्दानीका बिभिन्न बाटाँहरु फेला पर्नेछन । कला कौशलको प्रयोगमा आफन्तजनहरुको मन जित्न सफल रहिनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मन हर्षित तुल्याउनेछ।
मंसिर १७ गते शुक्रबार डिसेम्बर ३ तारीखको राशिफल, श्रीपशुपति नाथले सबैको कल्याण गरुन